Uncategorized – GOOSGOOS
Huddersfield vs Leicester City Highlights Apr 6, 2019. Huddersfield vs Leicester City Competition: Premier League Date: 6 April 2019 Kick-off Time: 15:00 BST Venue: The John Smith’s Stadium, Huddersfield . .
Huddersfield vs Leicester City Highlights Apr 6, 2019.
Manchester United ayaa heshiiskii abid ugu qaalisanaa kula soo wareegaysa Paul Pogba kaas oo 105 milyan oo gini ugu soo laabanaya Old Traffrod. Manchester United ayaa muddo daba socotay saxiixa da’yarkii ay bilaashka ku fasaxday sanadkii 2012 kii waxayna ka dhigaysaa xidigii abid ugu qaalisanaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Kooxda Juventus ayay faa’iidadii abid ugu waynayd u noqon doontaa in ay lacagtan ku iibiso xidig ay kooxdeeda ugu soo biiray si xor ah. Pogba ayaa jabin doona isla markaana la wareegi doona heshiiskii abid ugu qaalisanaa kubbada cagta haddii uu sida la filayo dhamaystiro ku biiristiisa Red Devils. Haddaba waa waa kuwee saxiixyadii abid ugu qaalisanaa ee kooxaha kubbada cagtu ay la soo wareegeen? Halkan ayaynu idiin kugu soo gudbinaynaa tobanka ciyaartoy ee abid suuqa kala iibsiga ugu qaalisanaa iyada oo Pogba uu qayb ka noqon doono liiskan. 10. Edinson Cavani – Napoli to PSG (2013): £55 milyan gini. Kooxda PSG ayaa 55 milyan oo gini kula soo wareegtay xidiga kooxdeeda ee Edinson Cavani kaas oo ay sanadkii 2013 dii ay kala soo wareegtay Napoli. 9. Kevin De Bruyne – Wolfsburg to Manchester City (2015): £55 Milyan gini. Tababare Jose Mourinho ayaa qiimo ka hooseeya intii ay Chelsea kula soo wareegtay Kevin De Bruyne kaga iibiyay kooxda Wolfsburg halkaas oo uu xidiga ree Belgium ku noqday mid cajiib ah oo laga cabsado. Manchester City ayaana xagaagii hore De Bruyne ka soo bixisay 55 milyan oo gini. Kevin De Bruyne ayaa xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Manchester City soo badhigay qaab ciyaareed aad u fiican wuxuuna hadda ka mid yahay xidigaha uu sida gaarka ah ugu xisaabtamayo Pep Gaurdiola. 8. Kaka – AC Milan to Real Madrid (2009): £56 Milyan gini. Halyaygii xulka qaranka Brazil ee Recardo Kaka ayaa 56 milyan oo gini ugu biiray Real Madrid isaga oo sanadkii 2009 kii ka soo wareegay kooxdii uu caanka ku noqday ee AC Milan. Maalintii uu Milan ka baxayay jamaahiirta kooxdiisa AC Milan ayaa ku hor mudaharaadayay gurigiisa si ay ugu qanciyaan in uu kooxda sii joogo. Laakiin Kaka ayaa u dhaqaaqay kooxda Real Madrid balse waxa uu noqday mid lagu fashilmay heshiiskiisii qaaliga ahaa. Kaka ayaa ugu danbayn dib ugu soo laabtay goobtii markii hore laga jeclaa kadib markii uu Mesut Ozil uu qaatay maaliyada No.10 ee Real Madrid. 7. Angel Di Maria – Real Madrid to Manchester United (2014): £59.7 Milyan gini. Manchester United iyo macalinkeedii Louis Van Gaal ayaa bankiga kooxdooda u jabiyay heshiiskii abid ugu qaalisanaa premier Leaque-ga ee ay Red Devils kula soo wareegtay Angel Di Maria. Man United ayaa snaadkii 2014 kii Di Maria ka soo bixisay 59.5 milyan gini laakiin heshiiskiisa ayaa noqday mid fashilmay. 6. Zlatan Ibrahimovic – Inter Milan to Barcelona (2009): £40m + Samuel Eto’o (£20m ) Barcelona ayaa sanadkii 2009 kii Inter Milan kala soo wareegtay Ibrahimovic kaas oo ay ka soo bixisay 40 milyan oo gini iyo waliba Samuel Eto’o oo markaas lagu qiimeeyay 20 milyan oo gini. Ibrahimovic ayaa Barcleona ugu qiimaysnaa 60 milyan oo gini. Waxaa la filayay in Ibrahimovic iyo Lionel Messi ay noqon doonaan laba gool dhaliye oo dilaa ah laakiin xidiga ree Sweden ayaa waqti adag ku soo qaatay Camp Nou kadib markii uu Pep Guardiola kursiga kaydka dhigay Ibrahimovic. Eto’o ayaa saddex koob kula guulaystay Inter Milan iyo Jose Mourinho halka Ibrahovic ay qasab ku noqotay in uu ku biiro AC Milan. Xukunka saxiixiisa: Mid lagu guuldaraystay 5. James Rodriguez – Monaco to Real Madrid (2014): £63m Indhaha aduunka oo dhan ayaa ku soo jeeday James Rodriguez kaas oo wacdro ka soo muujiyay koobkii aduunka ee sanadkii 2014 waxayna Real Madrid xidiga ree Colombia ay ka soo bixisay 63 milyan oo gini.Waxa ay u muuqatay in Real Madrid ay heshay xidig si wayn wax uga badali kara kooxdeeda laakiin wax badan ayaa taas iska badalay. James Rodriguez ayaa inta badan xili ciyaareedkii hore ku dhamaystay kursiga kaydka Madrid kadib marikii ay Benitez iyo Zidane ka doorteen xidigaha kale ee Los blanacos. 25 jirkan ayaa waqti adag ku soo qaatay Madrid marka laga reebo xili ciyaareedkii uu Ancelotti la soo shaqeeyay. Xukunka saxiixiisa: Mid lagu guuldaraystay 4. Luis Suarez – Liverpool to Barcelona (2014): £65m Markii ay Real Madrid la soo wareegtay James Rodriguez, kooxda ay sida wayn u xifiltamaan ee Barcelona ayaa 65 milyan oo gini Liverpool kalala soo wareegtay Luis Suarez. Xidiga ree Uruguay ayaa markaa ganaax afar bilood ah kala kulmay FIFA. Laakiin Luis Suarez ayaa saamayn aan la rumasan karin ku yeeshay kooxda Barcelona, wuxuuna xidhiidh layaableh la samaystay Lionel Messi iyo Neymar JR. Suarez ayaa xili ciyaareedkii hore Barcelona u dhaliyay 59 gool wuxuuna soo gabagabeeyay awoodii Messi iyo Ronaldo ay ugu tartami jireen abaal marinta gool dhalinta La Ligaha iyo kabta dahabka ah ee Yurub. Xukunka saxiixiisa: Mid guulaystay 3. Neymar – Santos to Barcelona (2013): £71.5m Xidiga dahabiga ah ee xulka qaranka Brazil ayaa ugu dhawaan hadda la mid ah Lionel Messi, waxaana loo arkaa badalka tooska ah ee Lionel Messi ka badali doona Camp Nou. Neymar ayay Barcelona kula soo wareegtay 71.5 milyan gini. Inkasta oo uu noqday heshiiskii ugu dhibta badnaa ee ay Barcelona ciyaartoy kula soo wareegto, haddana waxa ay lacagtan ku heshay mid ka mid ah xidigaha kubbada cagta ugu fiican. Neymar ayaa 141 kulan oo uu Barcelona u saftay waxa uu ku dhaliyay 85 gool isaga oo kooxda Luis Enrique ka caawiyay in ay si joogto ah koobab ugu guulaysato. 24 jirkan ayaa qayb wayn ku lahaa guulihii ay Barcelona gaadhaysay intii uu kooxda joogay. Xukunka saxiixiisa: Mid guulaystay 2. Cristiano Ronaldo – Manchester United to Real Madrid (2009): £80m Xidiga saddexda jeer ku guulaystay abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ee Cristiano Ronaldo ayay Real Madrid sanadkii 2009 kii lacag rekoodh aduun ahayd ay kagala soo wareegtay Manchester United. Real Madrid ayaa CR7 kula soo wareegtay 80 milyan oo gini. Ronaldo ayaa jabiyay ugu dhawaan rekoodh kasta oo Real Madrid u yaalay wuxuuna 348 kulan uu ugu dhaliyay 364 gool taasina waa sababtii ay Real Madrid lacagtan wayn uga soo bixisay xidiga ree Portugal. Ronaldo ayaa noqday xidigii abid goolasha ugu badan udhaliyay Los Blancos. Xukunka saxiixiisa: Mid guulaystay 1. Gareth Bale – Tottenham to Real Madrid (2013): £85m Haddii aan soo sheegnay in Cristiano Ronlado uu lacag rekoodh aduun ah uu soo biiray Real Madrid, Gareth Bale ayaa jabiyay isla markaana ilaa hadda haysta rekoodhka ciyaartoyga abid suuqa kala iibisaga ugu qaalisan. Real Madrid ayaa markale lacag qaali ah kula soo wareegtay Bale oo ay sanakdii 2013kii ay ka soo bixisay 85 milyan oo gini. Bale ayaa xili ciyaareedkiisii ugu danbeeyay ee Tottenham waxa uu 21 gool ka dhaliyay horyaalka Ingiriiska kadib markii uu 33 kulan ciyaaray. 27 jirkan ayay waqti ku qaadatay in uu Real Madrid saamayn dhab ah uu ku yeesho iyada oo saamaynta ugu badan uu haystay Cristiano Ronaldo. Bale ayaa noqday ciyaartoygii abid goolasha ugu badan ka dhaliyay La Ligaha ee ka soo jeeda Britain. Bale ayaa 47 gool ka dhaliyay 81 kulan oo La Ligaha ah. Xukunka saxiixiisa: Mid guulaystay HESHIISKA CUSUB EE Paul Pogba – Juventus – Manchester United (2016): £105m Waxay su’aashu tahay rekoodhka Gareth Bale ma noqon doonaa mid ugu danbayn la jabiyay isla markaana Paul Pogba ma noqon doonaa xidigii kubbada cagta abid ugu qalisanaa? Waxaa Qoray: Abdikadir Caawiye. Taariikh:21-07-2016 Manchester United ayaa heshiiskii abid ugu qaalisanaa kula soo wareegaysa Paul Pogba kaas oo 105 milyan oo gini ugu soo laabanaya Old Traffrod. Manchester United ayaa muddo daba socotay saxiixa da’yarkii ay bilaashka ku fasaxday sanadkii 2012 kii waxayna ka dhigaysaa xidigii abid ugu qaalisanaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Kooxda Juventus ayay faa’iidadii abid ugu waynayd u noqon doontaa in ay lacagtan ...
Manchester United ayaa heshiiskii abid ugu qaalisanaa kula soo wareegaysa Paul Pogba kaas oo 105 milyan oo gini ugu soo laabanaya Old Traffrod. Manchester United ayaa muddo daba socotay saxiixa da’yarkii ay bilaashka ku fasaxday sanadkii 2012 kii waxayna ka dhigaysaa xidigii abid ugu qaalisanaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Kooxda Juventus ayay faa’iidadii abid ugu waynayd u noqon doontaa in ay lacagtan ku iibiso xidig ay kooxdeeda ugu soo biiray si xor ah. Pogba ayaa jabin doona isla markaana la wareegi doona heshiiskii abid ugu qaalisanaa kubbada cagta haddii uu sida la filayo dhamaystiro ku biiristiisa Red Devils. Haddaba waa waa kuwee saxiixyadii abid ugu qaalisanaa ee kooxaha kubbada cagtu ay la soo wareegeen? Halkan ayaynu idiin kugu soo gudbinaynaa tobanka ciyaartoy ee abid suuqa kala iibsiga ugu qaalisanaa iyada oo Pogba uu qayb ka noqon doono liiskan. 10. Edinson Cavani – Napoli to PSG (2013): £55 milyan gini. Kooxda PSG ayaa 55 milyan oo gini kula soo wareegtay xidiga kooxdeeda ee Edinson Cavani kaas oo ay sanadkii 2013 dii ay kala soo wareegtay Napoli. 9. Kevin De Bruyne – Wolfsburg to Manchester City (2015): £55 Milyan gini. Tababare Jose Mourinho ayaa qiimo ka hooseeya intii ay Chelsea kula soo wareegtay Kevin De Bruyne kaga iibiyay kooxda Wolfsburg halkaas oo uu xidiga ree Belgium ku noqday mid cajiib ah oo laga cabsado. Manchester City ayaana xagaagii hore De Bruyne ka soo bixisay 55 milyan oo gini. Kevin De Bruyne ayaa xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Manchester City soo badhigay qaab ciyaareed aad u fiican wuxuuna hadda ka mid yahay xidigaha uu sida gaarka ah ugu xisaabtamayo Pep Gaurdiola. 8. Kaka – AC Milan to Real Madrid (2009): £56 Milyan gini. Halyaygii xulka qaranka Brazil ee Recardo Kaka ayaa 56 milyan oo gini ugu biiray Real Madrid isaga oo sanadkii 2009 kii ka soo wareegay kooxdii uu caanka ku noqday ee AC Milan. Maalintii uu Milan ka baxayay jamaahiirta kooxdiisa AC Milan ayaa ku hor mudaharaadayay gurigiisa si ay ugu qanciyaan in uu kooxda sii joogo. Laakiin Kaka ayaa u dhaqaaqay kooxda Real Madrid balse waxa uu noqday mid lagu fashilmay heshiiskiisii qaaliga ahaa. Kaka ayaa ugu danbayn dib ugu soo laabtay goobtii markii hore laga jeclaa kadib markii uu Mesut Ozil uu qaatay maaliyada No.10 ee Real Madrid. 7. Angel Di Maria – Real Madrid to Manchester United (2014): £59.7 Milyan gini. Manchester United iyo macalinkeedii Louis Van Gaal ayaa bankiga kooxdooda u jabiyay heshiiskii abid ugu qaalisanaa premier Leaque-ga ee ay Red Devils kula soo wareegtay Angel Di Maria. Man United ayaa snaadkii 2014 kii Di Maria ka soo bixisay 59.5 milyan gini laakiin heshiiskiisa ayaa noqday mid fashilmay. 6. Zlatan Ibrahimovic – Inter Milan to Barcelona (2009): £40m + Samuel Eto’o (£20m ) Barcelona ayaa sanadkii 2009 kii Inter Milan kala soo wareegtay Ibrahimovic kaas oo ay ka soo bixisay 40 milyan oo gini iyo waliba Samuel Eto’o oo markaas lagu qiimeeyay 20 milyan oo gini. Ibrahimovic ayaa Barcleona ugu qiimaysnaa 60 milyan oo gini. Waxaa la filayay in Ibrahimovic iyo Lionel Messi ay noqon doonaan laba gool dhaliye oo dilaa ah laakiin xidiga ree Sweden ayaa waqti adag ku soo qaatay Camp Nou kadib markii uu Pep Guardiola kursiga kaydka dhigay Ibrahimovic. Eto’o ayaa saddex koob kula guulaystay Inter Milan iyo Jose Mourinho halka Ibrahovic ay qasab ku noqotay in uu ku biiro AC Milan. Xukunka saxiixiisa: Mid lagu guuldaraystay 5. James Rodriguez – Monaco to Real Madrid (2014): £63m Indhaha aduunka oo dhan ayaa ku soo jeeday James Rodriguez kaas oo wacdro ka soo muujiyay koobkii aduunka ee sanadkii 2014 waxayna Real Madrid xidiga ree Colombia ay ka soo bixisay 63 milyan oo gini.Waxa ay u muuqatay in Real Madrid ay heshay xidig si wayn wax uga badali kara kooxdeeda laakiin wax badan ayaa taas iska badalay. James Rodriguez ayaa inta badan xili ciyaareedkii hore ku dhamaystay kursiga kaydka Madrid kadib marikii ay Benitez iyo Zidane ka doorteen xidigaha kale ee Los blanacos. 25 jirkan ayaa waqti adag ku soo qaatay Madrid marka laga reebo xili ciyaareedkii uu Ancelotti la soo shaqeeyay. Xukunka saxiixiisa: Mid lagu guuldaraystay 4. Luis Suarez – Liverpool to Barcelona (2014): £65m Markii ay Real Madrid la soo wareegtay James Rodriguez, kooxda ay sida wayn u xifiltamaan ee Barcelona ayaa 65 milyan oo gini Liverpool kalala soo wareegtay Luis Suarez. Xidiga ree Uruguay ayaa markaa ganaax afar bilood ah kala kulmay FIFA. Laakiin Luis Suarez ayaa saamayn aan la rumasan karin ku yeeshay kooxda Barcelona, wuxuuna xidhiidh layaableh la samaystay Lionel Messi iyo Neymar JR. Suarez ayaa xili ciyaareedkii hore Barcelona u dhaliyay 59 gool wuxuuna soo gabagabeeyay awoodii Messi iyo Ronaldo ay ugu tartami jireen abaal marinta gool dhalinta La Ligaha iyo kabta dahabka ah ee Yurub. Xukunka saxiixiisa: Mid guulaystay 3. Neymar – Santos to Barcelona (2013): £71.5m Xidiga dahabiga ah ee xulka qaranka Brazil ayaa ugu dhawaan hadda la mid ah Lionel Messi, waxaana loo arkaa badalka tooska ah ee Lionel Messi ka badali doona Camp Nou. Neymar ayay Barcelona kula soo wareegtay 71.5 milyan gini. Inkasta oo uu noqday heshiiskii ugu dhibta badnaa ee ay Barcelona ciyaartoy kula soo wareegto, haddana waxa ay lacagtan ku heshay mid ka mid ah xidigaha kubbada cagta ugu fiican. Neymar ayaa 141 kulan oo uu Barcelona u saftay waxa uu ku dhaliyay 85 gool isaga oo kooxda Luis Enrique ka caawiyay in ay si joogto ah koobab ugu guulaysato. 24 jirkan ayaa qayb wayn ku lahaa guulihii ay Barcelona gaadhaysay intii uu kooxda joogay. Xukunka saxiixiisa: Mid guulaystay 2. Cristiano Ronaldo – Manchester United to Real Madrid (2009): £80m Xidiga saddexda jeer ku guulaystay abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ee Cristiano Ronaldo ayay Real Madrid sanadkii 2009 kii lacag rekoodh aduun ahayd ay kagala soo wareegtay Manchester United. Real Madrid ayaa CR7 kula soo wareegtay 80 milyan oo gini. Ronaldo ayaa jabiyay ugu dhawaan rekoodh kasta oo Real Madrid u yaalay wuxuuna 348 kulan uu ugu dhaliyay 364 gool taasina waa sababtii ay Real Madrid lacagtan wayn uga soo bixisay xidiga ree Portugal. Ronaldo ayaa noqday xidigii abid goolasha ugu badan udhaliyay Los Blancos. Xukunka saxiixiisa: Mid guulaystay 1. Gareth Bale – Tottenham to Real Madrid (2013): £85m Haddii aan soo sheegnay in Cristiano Ronlado uu lacag rekoodh aduun ah uu soo biiray Real Madrid, Gareth Bale ayaa jabiyay isla markaana ilaa hadda haysta rekoodhka ciyaartoyga abid suuqa kala iibisaga ugu qaalisan. Real Madrid ayaa markale lacag qaali ah kula soo wareegtay Bale oo ay sanakdii 2013kii ay ka soo bixisay 85 milyan oo gini. Bale ayaa xili ciyaareedkiisii ugu danbeeyay ee Tottenham waxa uu 21 gool ka dhaliyay horyaalka Ingiriiska kadib markii uu 33 kulan ciyaaray. 27 jirkan ayay waqti ku qaadatay in uu Real Madrid saamayn dhab ah uu ku yeesho iyada oo saamaynta ugu badan uu haystay Cristiano Ronaldo. Bale ayaa noqday ciyaartoygii abid goolasha ugu badan ka dhaliyay La Ligaha ee ka soo jeeda Britain. Bale ayaa 47 gool ka dhaliyay 81 kulan oo La Ligaha ah. Xukunka saxiixiisa: Mid guulaystay HESHIISKA CUSUB EE Paul Pogba – Juventus – Manchester United (2016): £105m Waxay su’aashu tahay rekoodhka Gareth Bale ma noqon doonaa mid ugu danbayn la jabiyay isla markaana Paul Pogba ma noqon doonaa xidigii kubbada cagta abid ugu qalisanaa? Waxaa Qoray: Abdikadir Caawiye. Taariikh:21-07-2016
RASMI: Liverpool Oo Dhameystirtay Saxiixa Daaficii Augsburg Ee Ragnar Klavan. Liverpool ayaa dhameystirtay saxiixa daafaca Ragnar Klavan oo ay ka keensadeen kooxda Augsburg isagoo Reds u saxiixay heshiis ku kacaya sadex sano. Daafacaan 30-jirka ah ayaa ugu yimid Reds heshiis ku kacay £4.2 milyan oo pound wuxuuna soo gaaray gobolka Meryside ka maalinta shalay aheyd si uu tijaabada caafimaadka ugu maro kooxda macalinka Klopp ee Liverpool isagoona haatan ula duuli doona dalka mareykanka. War rasmi ...
RASMI: Liverpool Oo Dhameystirtay Saxiixa Daaficii Augsburg Ee Ragnar Klavan.